Pirato Anoedza Kusunungura Jesu | Upenyu hwaJesu
MATEU 27:15-17, 20-30 MAKO 15:6-19 RUKA 23:18-25 JOHANI 18:39–19:5
PIRATO ANOEDZA KUSUNUNGURA JESU
VAJUDHA VANOKUMBIRA KUTI BHARABHASI ASUNUNGURWE
JESU ANOTSVINYIRWA ACHIBATWA ZVISINA KUNAKA
Pirato audza mhomho yevanhu vari kuda kuuraya Jesu kuti: “Handina kuwana chikonzero chezvamuri kumupomera. Chokwadi, kunyange naHerodhi haanawo.” (Ruka 23:14, 15) Iye zvino achiedzazve kusunungura Jesu, Pirato anoudza vanhu kuti: “Mune tsika yokuti ndinofanira kukusunungurirai munhu papaseka. Naizvozvo, munoda here kuti ndikusunungurirei mambo wevaJudha?”—Johani 18:39.
Pirato anoziva kuti pane mumwe musungwa anonzi Bharabhasi, gororo rakapandukira hurumende uye mhondi. Saka Pirato anobvunza kuti: “Ndoupi wamunoda kuti ndikusunungurirei, Bharabhasi kana kuti Jesu, iye anonzi Kristu?” Vakusvudzirwa nevapristi vakuru, vanhu vanoti vari kuda kuti Bharabhasi asunungurwe, kwete Jesu. Pirato anobvunzazve kuti: “Ndoupi wamunoda kuti ndikusunungurirei?” Mhomho yevanhu inodanidzira kuti: “Bharabhasi”!—Mateu 27:17, 21.
Pirato anokangaidzwa obvunza kuti: “Saka, ndichaitei naJesu, iye anonzi Kristu?” Vanhu vanoti pamwe chete: “Ngaarovererwe!” (Mateu 27:22) Havasi kutombonyara kuti vari kuda kuurayisa munhu asina mhosva. Pirato anovateterera achiti: “Nemhosva yei, munhu uyu akatadzei? Hapana chandawana maari chakakodzera rufu; naizvozvo ndichamuranga ndomusunungura.”—Ruka 23:22.
Pasinei nekuti Pirato anoedza zvakadini kumusunungura, mhomho yevanhu iyi ine hasha inodanidzira pamwe chete ichiti: “Ngaarovererwe!” (Mateu 27:23) Vatungamiriri vechitendero vapandutsa mhomho iyi zvekuti yava kuda kutoona ropa richideurwa! Asi munhu wacho wavari kuda kuuraya haana mhosva yaapara uye haasi mhondi. Mazuva mashanu adarika vakatomutambira saMambo paaipinda muJerusarema. Vadzidzi vaJesu vanogona kunge vasipo, asi kana varipo, vanoramba vakanyarara kuti vasazivikanwa nevanhu.
Pirato anoona kuti haana chaari kubura nekuteterera kwake. Pava kuda kutoitika mhirizhonga, saka anotora mvura ogeza maoko ake mhomho yevanhu ichiona. Anovaudza kuti: “Handina mhosva yeropa romunhu uyu. Imi munofanira kuzvionera.” Mashoko iwayo haatombovhundutsi vanhu. Panzvimbo paizvozvo vanototi: “Ropa rake ngariuye patiri nepavana vedu.”—Mateu 27:24, 25.
Pirato ava kuita izvi kuti agutse zvido zvevanhu panzvimbo pekuita zvaanoziva kuti ndizvo zvakanaka. Saka Pirato anobva asunungura Bharabhasi, sezvo zviri izvo zviri kudiwa nemhomho iyi. Anoita kuti Jesu akumurwe nguo uye azvamburwe.
Pashure pekunge vamuzvambura kudaro, masoja anomupinza mumuzinda wagavhuna Pirato. Vanomuunganira voenderera mberi nekumuitira zvakaipa. Vanogadzira korona yeminzwa voimanikidzira mumusoro make. Vanomubatisawo tsanga muruoko rwake rwerudyi, vomupfekedza nguo tsvuku seiya inopfekwa nemadzimambo. Vanobva vatanga kumutsvinyira vachiti: “Kwaziwai, imi Mambo wevaJudha!” (Mateu 27:28, 29) Vanotomusvipira vachimurova mbama kumeso. Vanotora tsanga iya yakaomarara yavambomubatisa, votanga kumurova nayo mumusoro, vachiita kuti atowedzera kubayiwa neminzwa iri ‘pakorona’ yekumutsvinyira yavamupfekedza.
Kudzikama kwaJesu neushingi zvinoshamisa Pirato zvokuti anoedzazve kubuda munyaya yacho achiti: “Onai! ndinomubudisa panze pamuri kuti imi muzive kuti handiwani mhosva kwaari.” Kungava here kuti Pirato ari kufunga kuti paari kubudisa Jesu iye zvino vanhu vachamunzwira tsitsi pavanoona azara maronda uye achibuda ropa? Jesu akamira pamberi pemhomho yevanhu iyi isina kana tsitsi, Pirato anodanidzira kuti: “Tarirai! Munhu wacho!”—Johani 19:4, 5.
Mashoko aPirato angangova ari kuratidza kuremekedza Jesu uye kumunzwira tsitsi, sezvo ari kuona kuti kunyange zvake arohwa uye azara maronda, ari kuramba akanyarara uye akadzikama.
Dr. William D. Edwards vanotsanangura zvaiitwa nevaRoma pakuzvambura kwavaiita vanhu mubhuku rinonzi The Journal of the American Medical Association vachiti:
“Vaiwanzoshandisa chihwepu chipfupi chainge chiine tambo dzeganda dzakareba zvakasiyana-siyana idzo dzaizosungirirwa tumabhorosi twesimbi kana kuti tumapfupa twakapinza twemakwai. . . . Masoja eRoma paairamba achirova munhu kumusana nesimba rese, tusimbi twuya nemapfupa emakwai zvaimucheka zvichikonzera maronda akadzika zvichitsemura ganda. Pavaizoramba vachirova kudai, munhu aichekwa-chekwa kusvika pabhonzo, ganda richimwauka zvokuti nyama yaibuda kunze, ropa richijuja.
Pirato anoedza sei kusunungura Jesu kuita kuti asare asina mhosva?
VaRoma vaizvambura munhu sei?
Pashure pekunge Jesu azvamburwa, vanhu vanoenderera mberi nekumuitira zvinhu zvipi zvakaipa?